MB 2016 Jolay - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2016 Jolay
Ao amin'ny iray amin'ireo horonan-tsarimihetsika voalohany nataony, hoy i John Wayne tamin'ny mpiara-mitety kanosa iray hafa: "Tsy tiako ny miasa amin'ny vy marika - maharary eo amin'ny toerana tsy izy!" Hitako fa tena mampihomehy ilay fanamarihany, fa nahatonga ahy hieritreritra ny fomba hanimba ny filazantsara ny fiangonana amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba teknika tsy misy dikany toy ny fampiroboroboana ny vokatra marika. Taloha, ny mpanorina anay dia nitady adihevitra mivarotra mafy ary manao anay ho "fiangonana tokana". Io fomba fiasa io dia nampandefitra ny fahamarinana ara-Baiboly satria nohavaozina ny filazantsara mba hampandrosoana ny marika.
Midira amin'ny asan'i Jesôsy amin'ny fanaparitahana ny filazantsarany
Ny fiantsoana antsika Kristianina dia tsy ny hivarotra vokatra misy marika, fa ny fandraisana anjara amin’ny asan’i Jesosy noho ny fanampian’ny Fanahy Masina sy ny fampielezana ny filazantsarany amin’izao tontolo izao amin’ny alalan’ny Fiangonana. 'Miresaka zavatra maromaro ny filazantsaran'i Jesosy: Ahoana no nahatanterahan'ny famelan-keloka sy ny fampihavanana tamin'ny alalan'ny sorompanavotan'i Jesosy; ny fomba nanavaozan’ny Fanahy Masina antsika (sy ny dikan’ny hoe miaina fiainam-baovao); ny toetran’ny fiantsoana antsika ho mpanara-dia an’i Jesosy izay manatevin-daharana ny asa nanirahana Azy maneran-tany; ary ny fanantenana azo antoka fa ho anisan’ny fiombonan’i Jesoa amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina mandrakizay isika.
Misy ny fampiasana, na dia voafetra aza, izay mahasoa ny varotra (anisan'izany ny marika) amin'ny fanatanterahana ny asa fitoriana ny filazantsara izay niantsoan'i Jesosy antsika. Ohatra, azontsika atao ny mampiasa logo, tranonkala, media sosialy, bulletins, gazety, sary masina, gazety, ary fitaovam-pifandraisana hafa mba hanampiana antsika hampiely ny hafatr’i Jesosy sy hampisy finoana ny olona. Na izany na tsy izany, ny fomba toy izany dia tokony ho ilaina ary tsy hanakana antsika tsy ho maivana sy ho sira eo amin'ny fiarahamonintsika sivily. Avy amin'io fomba fijery io dia tsy manohitra ny varotra ampiharina araka ny tokony ho izy aho, fa te hanao antso ho amin'ny fitandremana ihany koa aho ary hampifandray izany amin'ny fomba fijery.
Araka ny famaritan’i George Barna, ny marketing dia “teny itambaram-be izay ahitana ny hetsika rehetra izay mitarika ho amin’ny fifanekena ny roa tonta hanakalo entana sahaza” (ao amin’ny A Step by Step Guide to Church Marketing) amin’ny fivarotana fiangonana). Barna dia manitatra ny teny hoe marketing amin'ny fampidirana hetsika toy ny dokam-barotra, ny fifandraisana amin'ny besinimaro, ny drafitra stratejika, ny fanadihadiana ny mpanjifa, ny fantsona fizarana, ny fanangonam-bola, ny politikan'ny vidiny, ny fiheverana ny fahitana ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa ho singa amin'ny varotra. Avy eo i Barna dia namarana hoe: "Rehefa mitambatra ireo singa ireo amin'ny fifampiraharahana izay manosika ireo antoko voakasik'izany hanakalo ny entana manana soatoavina sahaza, dia mihidy ny faribolana ara-barotra". Andeha hojerentsika mandritra ny fotoana fohy ny hevitra momba ny fifanakalozana amin'ny entana sahaza.
Vao taona vitsy lasa izay ny sasany tamin'ireo pasiteranay dia nandalina boky iray fanta-daza iray avy amin'ny mpitarika ny fiangonana megazy any Kalifornia. Ny hafatra lehibe amin'ny boky dia ny hoe raha tsenanao ny fiangonanao amin'ny fomba sasany, azonao atao ny manolotra olona sy ny fiarahamoniny zavatra izay ekeny am-pahatokiana. Ny sasany amin'ireo pasitera no nanandrana ny fomba fiasa natolotry ny varotra ary diso fanantenana satria tsy nitombo ny isan'ny mpikambana ao aminy.
Saingy tokony hivarotra ny filazantsara (sy ny fiangonantsika) ve isika amin'ny fomba hivarotan'i Walmart sy Sears ny vokatra - na hampiasa fomba ara-barotra izay ampiasain'ny fiangonana sasany mba hiteraka fitomboana isa? Heveriko fa miombon-kevitra isika fa tsy mila mampiroborobo ny filazantsara ho toy ny entana ho an'ny mpanjifa izay heverina ho sarobidy. Azo antoka fa tsy izany no tao an-tsain’i Jesosy rehefa nanome antsika ny andraikitra hitory ny filazantsara amin’izao tontolo izao sy hanao mpianatra ny olona avy amin’ny lafim-piainana rehetra.
Araka ny nosoratan’ny Apôstôly Paoly, ny filazantsara dia aseho ho toy ny fanehoan-kevitra na adala ataon’ny olona tsy ara-pivavahana (1. Korintiana 1,18-23) ary azo antoka fa tsy raisina ho toy ny zavatra mahasarika mpanjifa. Amin’ny maha-mpanara-dia an’i Jesosy antsika dia tsy araka ny nofo isika, fa ara-panahy (Romana 8,4-5). Azo antoka fa tsy lavorary isika amin’izany, fa amin’ny alalan’ny Fanahy Masina dia mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra isika (ary vokatr’izany, amin’ny asany). Raha takatra amin’izany fomba izany, dia tsy mahagaga raha nolavin’i Paoly ny teknika “olombelona” (laika) sasany amin’ny fampielezana ny filazantsara:
Koa satria Andriamanitra tamin’ny fahasoavany no nankinina amintsika izany asa izany, dia tsy ketraka isika. Lavintsika ny fomba fitoriantsika rehetra. Tsy mitady hamitaka na iza na iza isika ary tsy mamitaka ny Tenin’Andriamanitra, fa milaza ny marina eo anatrehan’Andriamanitra. Izay rehetra manana fo tso-po dia mahalala izany (2. Korintiana 4,1-2; Fiainam-baovao). Nolavin’i Paoly ny fampiasana ireo fomba izay mitarika ho amin’ny fahombiazana amin’ny fotoana fohy, kanefa dia miantraika amin’ny filazantsara. Ny hany karazana fahombiazana iriany eo amin’ny fiainana sy ny fanompoana dia lazaina fa vokatry ny firaisana amin’i Kristy sy ny filazantsara.
Misy ny fampanantenan'ireo fiangonana izay midera ny filazantsara ho toy ny fomba fahombiazana toa izao: «Tongava at our am-piangonana ary ho voavaha ny olanao. Hahazo fahasalamana sy fanambinana ianao. Hotahiana tokoa ianao ». Ireo fitahiana nampanantenaina dia matetika misy ifandraisany amin'ny hery, fahombiazana ary faniriana ho tanteraka. Ny fiantraikan'ny siramamy sy ny kapoka dia atolotra rehefa ampahafantarina ireo fepetra ilaina - rehefa mikasika ireo zavatra toa ny finoana ambony, ny fandraisana anjara amina vondrona kely, ny fandoavana fahafolonkarena, ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny serivisy amin'ny Fiangonana , na mifikitra amin'ny fotoana sasany hivavahana sy hianarana Baiboly. Na dia manampy amin'ny fitomboana hanaraka an'i Jesosy aza izy ireo, tsy misy na inona na inona zavatra azon'Andriamanitra atao amin'ny fahasoavana hanatanteraka ny faniriantsika amin'ny fifanakalozana ny zavatra heverina ho antenaina amintsika.
Dokam-barotra tsy miova ary ny varotra mamitaka
Ny fitaomana ny olona hilaza fa afaka manatona an'Andriamanitra mba hanome ny faniriany dia dokam-barotra tsy marina sy fivarotana hosoka. Tsy inona izany fa ny fanompoan-tsampy amin’ny endrika maoderina. Kristy dia tsy maty mba hahatanteraka ny filan-dratsintsika feno fitiavan-tena. Tsy tonga hiantoka ny fahasalamana sy ny fanambinana antsika Izy. Fa tonga kosa Izy mba handray antsika amin’ny fifandraisana tsara amin’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ary hanome antsika fiadanana sy fifaliana ary fanantenana, izay vokatry izany fifandraisana izany. Izany dia manome hery antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra malala sy manova ny fitiavana sy ny fanampiana ny hafa. Ity karazana fitiavana ity dia mety heverin'ny sasany (ary angamba maro) ho manitikitika na manafintohina, saingy manondro hatrany ny loharanon'io fitiavana mamonjy sy mampihavana ary manova io.
Tokony hamidy ny filazantsara ho tanjona ifanakalozana ny lanja mendrika eo amin'ny antoko roa nifanarahana ve isika? Mazava ho azy fa tsia! Ny filazantsara dia fanomezana ho an'ny tsirairay avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary ny hany azontsika atao dia ny manaiky ny fanomezam-pahasoavana amin'ny tanana tsy misy tanana sy misokatra - feno fankasitrahana feno ireo fitahiana noho ny fananan'Andriamanitra. Ny vondrom-pahasoavana sy ny fitiavana dia maneho amin'ny alalàn'ny fiainam-pankasitrahana - valiny nomen'ny Fanahy Masina nanokatra ny masontsika ary nandray ny faniriana rehareha sy fikomiana ho an'ny fahaleovantena hiaina ho an'ny voninahitr'Andriamanitra.
Rehefa eritreretiko ireo hevitra ireo dia tiako ny hanamarika fa eo amin'ny fiainantsika sy ao amin'i Kristy ary amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, fifanakalozana fifanakalozana manokana, fifanakalozana tena mahafinaritra. Azafady vakio ny zavatra nosoratan'i Paoly:
Voahombo miaraka amin’i Kristy aho. Izaho velona, ​​nefa tsy izaho ankehitriny, fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo, dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy (Galatianina). 2,19b-20).
Atolontsika eo amin'i Jesosy ny fiainantsika mpanota ary omeny antsika ny fiainany manao ny marina. Raha mahafoy ny fiainantsika isika dia mahita ny fiainany miasa ao amintsika. Raha mametraka ny fiainantsika eo ambany fanjakan'i Kristy isika dia hahita ny tena dikan'ny fiainantsika, tsy ny hiaina araka ny tanjontsika, fa ny hampitombo ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, Mpamorona sy Mpanavotra antsika. Ny fifanakalozana io dia tsy fomba fiasa ara-barotra - fahasoavana izany. Mandray fiarahana feno amin'Andriamanitra isika, ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ary omen'ny vatana vatana sy fanahy isika. Mahazo ny toetran'i Kristy marina isika ary manaisotra ny otantsika rehetra ary omena famelan-keloka tanteraka. Mazava ho azy fa tsy fifanakalozana fifanakalozana entana ilaina!
Ny mino rehetra an'i Kristy, lahy na vavy, dia zavaboary vaovao - zanak'Andriamanitra. Manome antsika fiainam-baovao ny Fanahy Masina - ny fiainan'Andriamanitra ao anatintsika. Amin'ny maha-olom-baovao antsika, dia manova antsika ny Fanahy Masina mba ho tonga bebe kokoa amin'ny fitiavan'i Kristy tanteraka an'Andriamanitra sy ny olona. Raha ao amin'i Kristy ny fiainantsika dia manana anjara amin'ny fiainany isika, na amin'ny fifaliana na amin'ny fitiavana maharitra. Mandray ny fijaliany isika, ny fahafatesany, ny fahamarinany, ny fitsanganany amin'ny maty, ny fiakarany ary ny fanjakany. Amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika, dia mpandova miaraka amin'i Kristy isika, izay tafiditra ao amin'ny fifandraisany tanteraka amin'ny Rainy. Amin'izany dia fitahiana amin'ny zavatra rehetra nataon'i Kristy ho antsika isika mba ho tonga zanaka malalan'Andriamanitra, tafaray aminy - miaraka amin'ny voninahitra foana!
Feno fifaliana amin'ny fifanakalozana mahafinaritra,